747-8 Ndị na - ere ihe na - ezuru onwe ha na ọdịda 1 afọ 8 ọnwa gara aga #1312
Nke mbụ, ana m enwe ekele maka ụdị akwa ahụ.
Na 747-8, na ihe ndi ozo nke 747 ndi ozo enwetara m site na ebe a, ndị na - eme ihe mberede anaghị ebubata na ọdịda. Mgbe m kụrụ ngbanwe + / ogwe aka onye na-ebubata ihe na quadrant qutrant na-akpali dịka kwa nke ndabara FSX 747-400, nke yiri ka ọ na-egosi na o jikebe ngwa agha, mana ọ naghị ebubata na ọdịda. Naanị ka ọ na - arụ ọrụ na 747-400 ndabara. Ationdị mgbanwe ọ bụla, ọbụlagodi iji 747-400 ya na mkpụrụedemede dị iche na - arụpụta na ntinye nke ndị na - ebu ihe na - ebubata ala.
Nke a ọ bụ nsogbu nkịtị ma ọ bụ ka m na-eme ihe na-ezighị ezi?
Ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu, ọ bụ ihe nwere ike idozi ngwa ngwa na njedebe m?
Ka o sina dị, ọ bụghị nnukwu ihe nkiri ma ọ bụrụ na ọnọdụ kachasị njọ bụ na m ga-eji aka m dozie ndị na-apụnara mmadụ ihe mgbe m rutere ebe m chere na m ga-adị ndụ.
Ndumodu ikpe azu: site ndị na-eme ya.
747-8 Ndị na - ere ihe na - ezuru onwe ha na ọdịda 1 afọ 8 ọnwa gara aga #1349
Oge ike page: 0.671 sekọnd